China Self-collection Cervical Swab Kit ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ | J.able
အိမ်တွင် ကိုယ်တိုင် စုဆောင်း၍ အသုံးပြုရ လွယ်ကူသည်။
သားအိမ်ခေါင်း စုဆောင်းခြင်း၊ တည်ငြိမ်ခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းအတွက် All-in-one စနစ်
ထုတ်ကုန်အမည်- သားအိမ်ခေါင်းနမူနာ Swab (ကိရိယာအစုံ)
ရည်ရွယ်အသုံးပြုခြင်း- သားအိမ်ခေါင်းနမူနာစုဆောင်းခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်စုဆောင်းခြင်း။
လျှောက်လွှာ- နမူနာ PCR စမ်းသပ်မှု၊ EIA၊ ဗိုင်းရပ်စ်ယဉ်ကျေးမှု၊ တစ်ခါသုံး မီးယပ်စစ်ဆေးမှု
ပစ္စည်း- ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Foam ထိပ်ဖျား၊ ABS Stick နှင့် အင်္ကျီလက်၊ Tube
1. တစ်ပိုင်းထိုင်ပြီး လဲလျောင်းအနေအထားဖြင့် နမူနာယူပါ။
2. ထုတ်ကုန်အထုပ်ကိုဖွင့်ပါ၊ နမူနာ swab ကိုထုတ်ကာ အင်္ကျီလက်ကို ဖယ်ရှားပါ။
3. အော်ပရေတာသည် လက်ကိုင်၏အောက်ခြေအဆုံးကို ကိုင်ထားပြီး ဘေးကင်းရေး baffle သည် မိန်းမကိုယ်မြစ်ဝသို့ထိသည်အထိ မိန်းမကိုယ်မှ swab ကို ဖြည်းညှင်းစွာထည့်သွင်းပါ။ မှတ်ချက်- နမူနာခေါင်းကို ဤနေရာတွင် လှည့်မထားပါ။
4. မိန်းမကိုယ်နမူနာယူရန်အတွက် လက်ကိုင်ပြွန်ကို လက်ယာရစ် ၆-၇ လှည့်ဖြင့် လှည့်ပါ။
5.လက်ကိုင်ကိုကိုင်ပြီး တူညီတဲ့ဦးတည်ချက်အတိုင်း 4-5 ကြိမ်လိမ်ပါ။ မှတ်ချက်- လှည့်ပတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ ဘေးကင်းသော baffle သည် မိန်းမကိုယ်မြစ်ဝသို့ထိအောင်ထားပါ။
6. နမူနာယူထားသော swab ကို မိန်းမကိုယ်အဖွင့်မှ ဖြည်းညှင်းစွာ ထုတ်ယူပြီး လှည့်၍မရတော့သည့်တိုင်အောင် လက်ကိုင်ကို ဆက်လက်လှည့်ပါ၊ သို့မှသာ နမူနာဦးခေါင်း၏ ချိတ်ဆက်မှုကို လုံးလုံးလျားလျား ပေါ်လွင်စေပါသည်။
7.ထိန်းသိမ်းထားသောဆေးပြွန်၏ဦးထုပ်ကိုဖွင့်ပြီးနမူနာခေါင်းကိုဆဲလ်ထိန်းသိမ်းထားသောအရည်ထဲသို့ထည့်ကာ 15-20 ကြိမ်အထက်နှင့်အောက်ကိုလှုပ်ခါပြီးနမူနာပြီးမြောက်ရန်အတွက်ပြွန်ထုပ်ကိုတင်းကျပ်ပါ။
1. လိင်မှုဆိုင်ရာဘဝမှတ်တမ်းမရှိ၊ ရာသီလာချိန်၊ ကိုယ်ဝန်နှင့် နို့တိုက်ချိန်များတွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။
2. လိင်အင်္ဂါ ဒဏ်ရာများ (ဒဏ်ရာ၊ ခွဲစိတ်မှု၊ ရောင်ရမ်းမှု၊ အကျိတ်) သို့မဟုတ် သားအိမ်ခေါင်း ခွဲစိတ်မှု (cryotherapy၊ electrocination၊ taping၊ laser) ရှိသည့် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ပြင်းထန်သောသားအိမ်ခေါင်းရောင်ခြင်းကို ဦးစွာကုသသင့်ပြီး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီးနောက် နမူနာယူသင့်သည်။
3. နမူနာမကောက်ယူမီ 24 နာရီအတွင်း လိင်ဆက်ဆံခြင်း သို့မဟုတ် ရေမချိုးပါနှင့်။ နမူနာယူခြင်းမပြုမီ3ရက်အတွင်း မိန်းမကိုယ်ရေသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် သားအိမ်တွင်းဆေးကို မလုပ်ဆောင်သင့်ပါ။
4. စာမေးပွဲကာလအတွင်း အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသည့်အခြေအနေတွင်ရှိနေသူများ၊
5. ဤထုတ်ကုန်သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးပြုရန်အတွက်သာ၊ လူတစ်ဦးအတွက်သာဖြစ်ပြီး၊ မျှဝေခွင့်မပြုသော တစ်ခါသုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
6. အမှီအခိုကင်းသောထုပ်ပိုးမှုပျက်စီးသွားသောအခါ၊ နမူနာခေါင်းကိုပြွန်နှင့်ထိတွေ့သည် သို့မဟုတ် နမူနာခေါင်းအား ပြွန်နှင့်ခွဲထုတ်လိုက်သောအခါတွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။
7. ထုတ်ကုန်ကို လူအများအပြားအသုံးပြုထားပြီး နမူနာ swab လုပ်ဆောင်ချက်သည် ဘေးကင်းပြီး နာကျင်မှုမရှိသော်လည်း အခြားကုမ္ပဏီများတွင် ပြုလုပ်ရန် အကြံပြုထားသည်။
8. နမူနာယူနေစဉ်အတွင်း သွေးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်တိုက်နာကျင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါက ခွဲစိတ်မှုကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး ကုသမှုခံယူရန် ဆေးရုံသို့သွားပါ။
9. အသုံးပြုသည့်အခါ၊ ထုတ်ကုန်၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကိုအာရုံစိုက်ပါ၊ သက်တမ်းကုန်သွားသောထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုရန်တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။
10. ထုပ်ပိုးမှုအမှတ်အသားကို ဂရုပြုပြီး အထုပ်ပျက်စီးခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ ပျက်စီးပါက အသုံးပြုရန် တားမြစ်ထားသည်။
11. အသုံးပြုပြီးပါက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စွန့်ပစ်နည်းလမ်းအတိုင်း စွန့်ပစ်ပါ။
ယခင်- Screw Cap Microtube
ဗိုင်းရပ်စ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး မီဒီယာ
နမူနာ Foam Swab
Viral Transport Media Kit, Nasopharyngeal Swab ကလေးအထူးကု, Buccal Swab စုဆောင်းမှုအစုံ, Sterile Microcentrifuge Tubes များ, Self Standing Centrifuge Tubes များ, Falcon Centrifuge Tubes 15ml,